Faalamni qilleensaa maaraatoonii magaala keessaa sodaachisaa? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Maaraatoonii Niw Delhii baranaa irratti hirmaattonni haguuggii afaanii godhan mul'atani ture
Maaraatoonii walakkaa Delhii Hindii taasifamerratti hirmaattonni funyaan isaanitti waa haguugani mul'atan hangam qilleensi maagaalotaa akka faalame agarsiisa.
Qilleensi magaalatti waan badeef manneen barnoota muraasni cufamani ture. Sababa kanaaf, ogeessonni fayyaa muraasni dorgommiin guyyaa kaanitti akka darbu gaafatani ture.
Yeroo dorgommii sanaa qilleensi magaalatti 'badaa' jedhamurraa gara 'rakkoo fayyaaf saaxilutti' jijjirameera. Atileetonni Itoophiyaa Biraanuu Laggasaa fi Almaaz Ayyaanaa korniyaa lamaan mo'aniiru.
Dorgommii dura Biraanuun atileetonni 'sodaatanis' guyyaa dorgommii garuu 'hammana hamaa akka hin turre' dubbateera.
Kanaafuu, atileetonni cimoo fi reefu lafaa dhufan, sadarkaa faalama qilleensaa magaalaa keessa jiruun yaadda'u qabuu? Kanaafuu, fiigicha guddicha Itoophiyaa gaafa Dilbataa Finfinnee dorgomamurratti hirmaattonni of-qopheessuu qabuu?
Faalamni qilleensaa sagantaa ispoortii irratti yaaddoo ta'e beeka. Olompikii Los Anjelees bara 1984 gaggeeffame irratti rakkoo faalama qilleensaan guyyaa kaanitti akka darbu naamoonni yaada kaasa turan. Kana irrattiimmoo itti fayyadamni boba'aa uumamaa guddataa jira.
Abbootin taayitaa Chaayinaa itti fayyadama konkolaataa fi warshaalee cufanis Olompikiin Beejing taphoota olompikii kamiyyuu keessa kan haalaan faalame jedhameera.
Magaalota addunyaa hedduu keessatti hanguma ummanni guddate qulqullinni qilleensaas hin xiqqaata. Kana irrattimmoo itti fayyadamni qoraanii olaanaadha.
Haa ta'u malee, atileetonni yeroo gabaabaaf faalama qilleensaaf yoo saaxilaman, rakkoo fayyaa yeroo dheeraa namarra turuuf isaan saaxiluu isaaf ragaan guutuu hin jiru.
Dhimmi guddaa namoonni bakka qilleensa faalametti jiraatan balaa yeroo dheeraaf saaxilamu danda'u isaaniiti.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa faalama qilleensaa manaan ala diidatti uumamuun namoonni miiliyoona 3 ta'an waggaa waggaan ijoollummaatti du'u jedha.
Yeroo namoonni ispoortii adda addaa shaakalan immoo hammi qilleensa keessatti fudhatan guddata. Kunis, hanguma isaa balaa isaa guddisa.
Qulqullinni qilleensa Finfinnee 'giddugaleessa'
Waa'ee faalama qilleensaa magaalaa Finfinnee qorannoo muraasatu jira. Haa ta'u malee, qorattoonni akka jedhanitti faalamni qilleensaa biyya Afrikaa Bahaatti du'a yeroo maleef nama saaxilaa jira.
Finfinneen qorannoo idil-addunyaa Yunivarsiitii Barmingihaamin hordofamu keessatti hammatamteetti. Baay'inni ummata Itoophiyaa bara 2015 - 2030 dhibbantaa 80'n guddata jedhame eegama. Qorannoon kunis mootummaan ragaa qabatamaa akka argatu gargaara.
Ummanni baay'een nyaata qopheesusuf qoraan irratti hundaa'a. Kosii daandirra gubuufi itti fayyadamni konkolaataa baay'achaa jira.
Buufanni to'annoo Imbaasii Ameerikaa Finfinnee argamu sadarkaa faalama qilleensaa magaalatti 'giddugaleessa' jedheera. Sadarkaa kanaan, ijoollee fi ga'eessonni akkasumas namooni rakkoo hargansuu qaban ala baay'ee akka turan hin gorsamu.
Nutis waa'ee akkasi kana hin baranne, isaaniis(leenjistoonni) waan akkanaa nutti hin himan.
Lammii Birhaanuu, Atiletii Maaraatoonii
Atileetonni Itoophiyaa beekamooniifi kan lafaa dhufan hedduun tajaajila leenjii argachuuf jecha jireenya isaanii Finfinneetti godhatu.
Pirezidantiin federeeshinii atiletiksii Hayilee G/Sillaasee kuni akka rakkoo ta'e quba qaba.
Atileetin shaampiyoonaa Olompikii ta'e kuni dhiyeenya kana atileetonni faalama qilleensaatti akka hin saaxilamnef Finfinnee irraa osoo fagaatani wayya jedheera.
Atileetin maaraatoonii Boston bara darbe injifate, Lammii Biraanuu garuu waa'ee faalama qilleensaa baay'ee quba hin qabnu jedha.
''Nutis waa'ee akkasi kana hin baranne, isaaniis(leenjistoonni) waan akkanaa nutti hin himan.''
Leenjistoonni hedduun haala qilleensaa, teessuma lafaa, fi wanta akkanaa malee sadarkaa faalama qilleensaa nutti hin himani jedheera. Kuni yaada atileetota biraatis.
Atileetin maaraatoonii Dubaayii fi Siyaamen inijifate beeku kuni rakkoon faalama qilleensaa akka isa mudate hin beenne dubbateera.
Leenjisaan maaraatoonii Hajii Adiloo garuu atileetotatti akka dubbataniifi muraasnis akka quba qaban dubbatu.
''Magaalota gurguddoo qofa osoo hin taane, Finfinnee dhumatillee qilleensi faalameera.
Qilleensi isaan harkisani waan faalame ta'u danda'a. Waan ol bahani bosona keessa argatan magaala keessa hin argatan.''
Goodayyaa suuraa Hirmaattota maaraatoonii walakkaa Niw Delhii keessaa tokko akkana faalama qilleensaa
Qopheessitoonni fiigicha guddicha Itoophiyaa dorgommii gaafa Dilbataa dorgomamerratti faalamni qilleensaa nu hin yaaddessu jedhaniiru.
Dorgommii kanarratti dorgomtoonni 44,000 fageenya 10km ta'u akka fiigan qopheessitoonni dorgommichaa himaniiru.
Daarektarri dorgommichaa Ermiyaas Ayyalaa yeroo takka takka rakkinni faalama qilleensaa Finfinnee keessa akka mudatu hubadhuus hammana kan nu yaaddessu miti jedheera.
''Tokko fiigichi gaafa Dilbataati. Lammatammoo, konkolaataan daandirra akka hin deemne ni dhorkama. Yeroos waan fiigamuus hammana nu hin yaaddessu.''
Haala qilleensaa hamaa
Kuusaa Fakkii Faalama Qilleensaa: Dorgommii Maaraatoonii Walakkaa Deelhii
''Kun mallattoo nageenyaa miti'' Lammaa Magarsaa
Sanyii qamadii 'addunyaa beela oolchu'
'Biyyaa bahuuf rakkoo, deebi'uufis rakkoo?'
"Waraanni daangaa gadhiisee bahaa jiru hin jiru"